विश्वकै महँगो तरकारी, १ किलोको मूल्य डेढ लाख ? — Imandarmedia.com
विश्वकै महँगो तरकारी, १ किलोको मूल्य डेढ लाख ?
काठमाडौं । मान्छेले खाने तरकारी यतिसम्म महँगो हुन्छ भन्ने कुरा जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्दछ । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो तरकारी छ, जसको मूल्य एक किलोकै झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ पर्दछ । सोही कारण यो तरकारी विश्वकै सबैभन्दा महँगो तरकारी बनेको छ ।
यो तरकारीको नाम ‘हप शुट्स’ हो । उक्त तरकारीको बोटमा लाग्ने फूललाई ‘हप कोन्स’ भनिन्छ । सोही फूललाई बियर बनाउन प्रयोग गरिन्छ । बोटको बाँकी भागलाई तरकारी वा सलादको रुपमा खाइन्छ । यो तरकारी यति धेरै महँगो हुनाका कारण कुनै तरकारी बजार वा सुपरमार्केटमा सायदै पाइएला ।
हप शुट्स औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ भनिन्छ । सोही कारण त्यसको प्रयोग जडीबुटीको रुपमा पनि हुने गर्दछ । मानिसहरु यसलाई काँचै पनि चपाउने गर्दछन् । यसको औषधीय गुणको पहिचान शदियौँ अघि नै भएको हो । इस्वी सम्वत् ८०० को आसपास मानिसहरुले यसलाई बियरमा मिलाएर पिउँदथे । त्यो सिलसिला अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिले यो वनस्पतीको खोज उत्तरी जर्मनीमा भएको थियो । त्यसपछि यसको प्रयोग विस्तारै पूरै विश्वमा नै फैलियो । १८ औँ शताब्दीमा बेलायतले त यो वनस्पतीमाथि कर समेत लगाएको थियो भने बियर बनाउँदा यो वनस्पती अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने नियम बनाइएको थियो ।
रोचक-विचित्र सँग सम्बन्धित
अब्राहाम लिंकनको केहि कपाल ८१ हजार भन्दा बढी अमेरिकी डलरमा बिक्यो
एकजना व्यक्तिले आफ्नो हराएर फेला परेको मोबाइलमा बाँदरको सेल्फी,
रुखसँग बिहे गरेकी यी महिलाले मनाइन् एनिभर्सरी पहिलो वर्षगाँठ
कुन देशमा पाउछ रातीकाे समयमा चम्किएर पहाड नै झलमल बनाउने अनौठो च्याउ
६२ वर्षको एक्लो अजिंगरले ७ वटा अण्डा पारेपछि
भगवान खुसी पार्न भन्दै एक जान मानिसले पार्रे शरीरमा सयौँ प्वाल ?
सामाजिक परम्परा अनुसार, अनौठो गाउँ जहाँ घरज्वाइँ बस्नैपर्छ
सुनकाे भित्ता भएकाे पुस्ताकालय चमेरा पालिएको, पोर्चुगलबारे केही रोचक तथ्यहरु प्रष्ट
भुस्याहा बिरालोलाई सेक्योरिटी गार्डको जागिर
जलाइने भयो यी महिलाको २२ लाखवाला झोला, किन्दा प्रक्रिया नपुगेपछि हुने भयो यत्रो घाटा